विकृति बल्झाउने कि भाइचारा बचाउने ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
विकृति बल्झाउने कि भाइचारा बचाउने !
२०७७ आश्विन २५, आईतवार ११:५७ गते
पानी नै अछूत ठान्ने हाम्रो अन्धविश्वासी परम्परालाई आर्थिक अवस्थाको दायराले निकै कसिलो रूपमा बाँधेको छ । अछूत भनिएका धनीमानीका छोरीलाई बिहा गर्ने छूत भनिएकाहरूको सोचलाई आर्थिक स्तर र चेतना स्तरले परिवर्तन गरिदिएको देखिन्छ । संविधानमा दलित, महिला, अपाङ्ग, विपन्नका कुरा जे जति गरिए पनि या त विकासका नीति र योजनामा कोटा पद्धतिलाई प्रश्रय दिइए पनि चेतनास्तर र आयस्तरलाई बढाउने उपाय खोजिनु उत्तम हुन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा संविधानतः निक्र्योल गरिएको अधिकारको व्याख्याले हिजो कसिएको सामाजिक सम्बन्धलाई भुलेको देखिन्छ ।
समाजको बहुरङ्गमा उँच–नीच मात्रै नहुने हो भने हाम्रो समाज साँच्चै सुन्दर र सभ्य बन्न सक्छ । नेपालको समाजलाई बदल्न मानिसमा चेतना हुनु आवश्यक छ ।
तथापि, हरेक मानिसको योग्यताको कदर र श्रमको मूल्याङ्कन नगरिने हो भने समृद्धिको मियो कमजोर हुँदै जान्छ । मानिसले मानिसलाई मानिसका रूपमा हेर्नका लागि व्यक्ति एक्लै सक्षम भएर पुग्दैन । कुनाकन्दराको समाजमा नै परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । तर, यदि परिवर्तनका लागि भनेर बनाइएका नीतिमा सामाजिक दरार बढिरहन्छ भने त्यसले मित्रतालाई शत्रुतामा बदलिदिन्छ । हिजो मिलेर बसेका मानिसलाई उचाल्ने र पुर्खाको कमजोरी खोजेरै सत्तोसराप गर्ने हो भने त्यसको निष्कर्ष वर्तमान समाजका लागि लाभप्रद नहुन सक्ला । यथास्थितिबाट माथि उठ्नका लागि समाज भनेको सम्झौता नै भएकाले मिलेमतो नभए त्यो समाज खण्डहरमा बदलिन्छ । यसर्थ बहुसामाजिक सम्बन्धलाई गाँस्ने प्रेमको डारीलाई चुँडाएर एकताको कुरालाई गाँस्न सकिँदैन ।
यसो भनिरहँदा महिला हक र अधिकारका कुरा गरियो तर तेस्रो लिङ्गी थोरै भएकाले छुटिरहे । दलित, आदिवासीलाई कोटा पद्धतिबाट सुविधा भनेर दिइयो तर उता जातको दबाब हटाउन जातकै सीमालाई कस्ने गरी सुविधा तोकियो । क्षमतालाई कुण्ठित र अपमान गरेर समृद्धिको सपना देखिनु कुनै पनि हदमा बुद्धिमतापूर्वक छैन । जातको दायरा बन्यो, दलितलाई दलित हुँ भन्ने बनायो अनि अधिकार माग्नुपर्छ भन्ने कुरा नै धेरै हदमा सिकायो ।
साँच्चै पीडित र शोषित दलितको हातमा त्यो अधिकार पुगेन र जीवन स्तर सुध्रिएन भने कोटा पद्धति मात्रै सबैथोक हो भनिरहनु कति वाञ्छनीय होला र ! यसले त मूलतः बाहुन÷क्षेत्रीहरूमा ‘कोटा पनि नपाउने हो भने हामीले पढालेखा हुनुको के अर्थ’ भन्ने सोचलाई बढायो । जातको विभेदमा जन्मेको समस्यालाई हटाउन जातकै आधारको सीमा रेखा त कोरियो तर आर्थिक विषमता र मानसिक सङ्कुचनको घेरोलाई तोड्ने चेतनशक्तिका लागि जाँगरिलो अभ्यासै भएन ।
कानुन बन्यो । कानुनले भन्दा समाजलाई त चेतनाले ब्युँझाउँछ । सोचको दायरा खुम्च्याएर समृद्धिको सपना तुन्नु नै आपैmँमा उल्टो प्रक्रिया हो । आखिर जातका आधारमा भन्दा आर्थिक अवस्थाका आधारमा हेरेर उकास्नुपर्ने हो । विकट क्षेत्रको विकासको मियो बनाउनुपर्ने हो । त्यहाँ देश र जनता शिवाय अरू को नै हुने हो र ! तर, आजको परिवर्तित सन्दर्भले समाजको आपसी सम्बन्धमा फरक हुनुको अनुभूतिलाई अभैm बढी मलजल गराइदियो । यो सोचले मान्छे हुनुको मर्मबोध गर्ने मानवीय गुणलाई बुझ्ने भावनात्मक एकता र सम्बन्धलाई टाढा बनाइदियो । फलतः सामाजिक ऐँचोपैँचो, सर–सहयोग, आपसी सद्भावको सुन्दर सामाजिक सम्बन्धको डोरीलाई समेत सजातीय झुण्डभित्र लगेर खुम्च्यायो तर समानताको आँखा खोल्नुपर्नेमा आफ्नो वर्ग खोज्ने अभ्यास मात्रै गरायो । यसबाट हामीले सोचेको जस्तो परिवर्तन र समाज विकासमा एकत्वगत प्रभावलाई आँकलन गरिरहेका छैनौँ ।
प्रेम बढाउनुपर्ने थियो तर अन्तरविभेद र अन्तरविरोध बढायो । अधिकार खोज्न भन्यो तर अधिकार नदबाउन भन्न सकेन । हिजोको अवस्थामा कसिलो बनेको मानवताको नातोलाई जोगाउँदै अन्धपरम्परा, छुवाछूत, विभेद, कुप्रथा तोडौँ भन्ने कोणबाट व्याख्या भएन । त्यसैले, आज हामी अनुहार र जात हेरेर, पार्टी र खेमा हेरेर, लिङ्ग वा अन्य विविध वर्गलाई हेरेर झुण्ड–झुण्ड हुन मात्रै अभ्यस्त छौँ तर मानवताको आँखामा मानवले मानवलाई उकासौँ भन्ने शैलीका बारेमा कतै कसैबाट सोचेनौँ । क्षमताभन्दा पनि जात र खेमा पद्धतिले किन प्रश्रय पाउँछ ? जातवादमा गएर थुरिएको साम्यवादको लक्ष्य दसौँ वर्षदेखि केवल पृथक् दायरा निर्माणमा सीमित भइरहेको छ तर चाहेको परिवर्तन भएन ।
कसैमाथि बेकसुर अन्याय गरिरहिएको छ । त्यहाँ मानवताको पर्खाल ढलिरहेको छ । हामी त समीक्षा र विश्लेषण आपूmमुखी गरिरहँदा इतिहासलाई गाली गर्छौँ तर वर्तमानलाई बिर्सन्छौँ । अधिकारका कुरा गर्छौँ तर कर्तव्य भुल्छौँ । कानुन बनाउँछौँ तर न्याय बिर्सन्छौँ । त्यसैले अहिलेको पद्धति सोचको दायरा र सङ्क्रमणकालीन शैलीमा अनुबन्धित रहेको देखिन्छ । यो सोचले विभेद अवश्य बढ्छ तर साम्यवाद सम्भव नहुन सक्छ ।
अबको दायराभित्र भाइचारा र प्रेम हुनुपर्छ । अन्तर्जातीय विवाह हुँदैमा, छोएको–नछोएको भन्दैमा मानवताको सम्बन्ध कसिलो हुँदैन किनकि जहाँ मानवता हुन्छ त्यहाँ विदेशको, स्वदेशको, यो जात या ऊ जात नभएर केवल मानिस मात्र बाँकी रहन्छ । यो भावनात्मक सम्बन्ध हो जसलाई कसैले गाँसेर, टाँसेर प्रगाढ तुल्याउन सकिँदैन । समाजमा चल्ने नियम शब्दमा कोरिने कानुनभन्दा बलियो हुन्छ । त्यहाँ साम्यवादमा उक्लने सहयोगी समाज स्वतः कायम रहन्छ । हाम्रो समाजमा आर्थिक विषमतालाई चिर्ने सोचको खाँचो छ ।
समाजले हिजोको नकारात्मक पक्षलाई मात्रै सुधारेर भाइचाराकै कोणबाट परिवर्तन गर्ने हो भने त्यसले विभेद र अन्धविश्वासलाई तोड्छ अनि साम्यवादको द्रुत मार्ग खुल्न सक्छ ।
नेपाली समाजको भाइचारा र मानवताको जगमा स्वार्थ, दलन, जलन वा विभेदभन्दा अभैm परको प्रेम पनि थियो र
आजसम्म केही त छ । त्यसमा मुखियाको तानाशाही शासन पद्धतिको भ्रमभन्दा पनि आर्थिक स्रोतको बचतको ज्ञान र चेतनाको परिवेश कमजोर भयो । आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरू जातका आधारमा माथिल्ला नै भएर पनि आफ्नैबाट समेत नराम्ररी हेपिए । फलतः अर्काको कुत र अधियाँ गरेर पेटको जोहो गर्न मानिस बाध्य भयो । त्यहाँ जातले होइन, आर्थिक विषमताले प्रहार ग¥यो । यो पक्षलाई हाम्रो संविधानले खुलेर सम्बोधन गरेन । यसको अर्थ सामाजिक मर्यादा र अवस्थितिलाई राजनीति गर्नेले बनाएका एजेन्डामा सीमान्तीकृत गराइदियो । विपन्न र सम्पन्नको खाडललाई पुर्ने ठोस नीति बनेन । एक त छँदै छैन, अर्कोतिर भएर पनि बचाउन जान्दैन । हुने र सक्नेले शिक्षा–दीक्षा पाउँछ । नहुनेले पेटको जोहोका लागि युद्ध गरिरहन्छ ।
हाम्रो समाजलाई विश्वको परिवर्तित परिवेश अनुकूल ढल्काउनका लागि युवा वर्गको श्रमको सम्मान हुनु आवश्यक छ । आजको युवा नै भोलिको अनुभव भएकाले मुलुकले समाजका युवाको चेतना र बौद्धिक धरातलमा समन्यायिक आधार दिनै सकेन । घरको जग्गा बँझ्याएर विदेश पलायन हुने कसैको पनि रहर होइन । धेरै हदमा हाम्रो समाजले अहिलेसम्म आइपुग्दा पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने सिकिसकेको देखिन्छ ।
आज युवाले विदेशिनु सामान्य लाग्न थालेको छ । यसरी नै परिवर्तनमा पनि समाजको आकर्षण बढ्ने हो भने र सरकारको ध्यान ग्रामीण समाजको समुन्नतितर्पm मोडिने हो भने समाज परिवर्तन सम्भव छ । हिजोको पुस्तालाई वा हाम्रा अग्रजलाई अपमान गरेर होइन उहाँहरूको ज्ञान र अनुभवलाई शिरोधार्य गरेर सकारात्मक सोचतिर लम्कनु अबको उत्तम मार्ग हो । हिजो जे राम्रो पद्धति थियो त्यो पुर्खाको देन हो । जे नकारात्मक थियो त्यो आजको समयमा अनुचित हो भन्ने भयो । कमसेकम परिवर्तन हुनु नै एउटा सुखद पक्ष हो ।
तथापि, के समाजको परिवर्तनमा युद्ध र विद्रोहकै आवश्यकता पर्ने हो त ! यो एउटा सैद्धान्तिक व्याख्या होला तर आज हामीले बोध गरिरहेको समाज आलस्यमा झुल्ने प्रकृतिको छैन । श्रम र श्रमको मूल्य पाउँदा श्रममा संलग्न हुन चाहने युवाशक्ति नै समाज परिवर्तन र देश निर्माणका सबल आधार हुन् ।